Ny Ilainao Fantarina Momba Ny Fifandonan’i Etiopia sy Ireo Bilaogeran’ny Zone9 : Didim-Pitsaràna Andrasana Amin’ny 20 Jolay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2015 11:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Español, русский, English
Polisy mitari-dàlana an'i Natnael Feleke (afovoany havanana) ary ilay bilaogera mpiara-dia aminy Atnaf Berahane (afovoany havia) ho any amin'ny fitsaràna. Sary natolotry ny “Trial Tracker Blog”.
Hatramin'ny nisamborana azy ireo voalohany sy namonjàna azy ny 25 Apriy 2014, betsaka ny fivoaram-baovao sy fiovàn-javatra natrehan'ireo bilaogeran'ny Zone9 ao Etiopia tamin'ny raharaha momba azy ireo. Rehefa lazaina izany rehetra izany, in-30 niseho fitsaràna tao anatin'ny 15 volana izy ireo, nahemotra isaky ny mihetsika. Saingy tamin'ny herinandro lasa, niaraka tamin'ny famotsorana ireo dimy voafonja, tonga aminà sehatra iray saropady ankehitriny ny raharaha.
Etiopiana mpanoratra miisa dimy (efatra any am-ponja ary iray tsy nanatrika) no mbola miatrika fitsarana noho ny fanenjehana azy ireo aminà heloka bevava izay lazain'ny governemanta Etiopiana fa notanterahana tany amin'ny fiandohan'ny May 2012. Ny 20 Jolay, andrasana ny hamoahan'ny Fitsarana Tampony Etiopiana ny didy momba ilay raharaha.
Endalk Chala, mpikambana iray mpanorina ny fitorahana bilaogy iraisana “Zone9″ sady mpiara-miasa amin'ny Global Voices, mamaly fanontaniana fototra miisa enina mipetraka ao an-tsain'ireo mpanohana an-dry zareo eran-tany.
Fa inona marina no tena vesatra anenjehana ireo mpanoratra?
Lazain'ireo mpampanoa lalàna fa niditra tamin'ny fanaovana fitsofohana an-tsokosoko ireo mpanoratra ireo, ka tanjona tamin'izany ny hanongana, hanova na hampiantona ny Lalàm-panorenana Federalin'ny Fanjakana Etiopiana, amin-kerisetra, fandrahonana na firaisana tsikombakomba. Nanomboka tamin'izany no niampangan'ireo mpampanoa lalàna ireo mpanoratra ireo ho manafina ny fifandraisan'izy ireo hifono anaty ‘codes’ sy manaparitaka asa soratra mihantsy ny olona hikorontana na hanongana, hanova na hampiantona ny Lalàm-panorenana Federalin'ny Fanjakana Etiopiana, amin-kerisetra, fandrahonana na firaisana tsikombakomba. Raha toa ilay vesatra voalohany ka milaza fa nanitsakitsaka ny lalàna napetraky ny firenena hiadiana amin'ny asa fampihorohorana ireo mpanoratra, ilay farany kosa dia fanitsakitsahana ny lalàna momba ny heloka bevava ao amin'ny Repoblika Demokratika Federalin'i Etiopia. Samy vesatra henjana daholo izy roa ireo raha resaka sazy, indrindra fa nafantoky ny media tamin'ny resaka vesatra noho ny asa fampihorohoroana koa ny fandrakofana vaovao nataon-dry zareo tamin'ilay raharaha.
Tsy efa navotsotra tamin'ny herinandro lasa ve ireo mpanoratra?
Misy olona folo no voampanga, dimy amin'ireo no navotsotra tampoka tamin'ny herinandro lasa. Tena misitery ny fomba namotsorana ireo mpanoratra fa na ireo mpisolovava azy ireo aza dia tamin'ny fampielezampeo no nandre ny vaovao momba ilay famotsorana. Lazain'ireo kiana fa miezaka ny manatsara endrika mialoha ny fitsidihana efa manakaiky hataon'ny Filoha Obama ao Addis Ababa, Etiopia ny governemanta tamin'ny namotsorany ireo olona vitsivitsy ireo.
Inona no tena atao hoe fitsarana “ambony dabilio”?
Ao anatin'ny rafi-pitsarana ao Etiopia, ny fitsaràna “ambony dabilio” ihany no misy, izay ahitàna mpitsara iray na andiany vitsy, fa tsy vondronà mpitsara (fanamarihana: izay raha ny mahazatra dia ahitàna mpitsara miisa roa ambinifolo), no mamaritra ny olona iray ho diso na tsy manan-tsiny. Mifanaraka amin'izany, mpitsara salantsalany antsoina hoe Shelemew Bekele izay nitarika mpitsara telo hafa no niandraikitra ny raharahan'ireo bilaogeran'ny Zone9. Kanefa, efa im-betsaka no nanipihan'ireo bilaogeran'ny Zone9 fa efa in-4 raha kely indrindra no novàna ny mpitsara nampiandraiketina ilay raharaha hatramin'ny nanombohan'ny fanenjehana azy ireo. Taorian'ny nanoheran'ireo bilaogera ny fitanilàn'ilehio mankany amin'ny mpampanoa lalàna, nanome toky ilay mpitsara, Judge Shelemew, ny hiala amin'ilay raharaha nefa dia mbola izy ihany no miandraikitra ilay raharaha.
Inona no hiafaràn'ireo bilaogera?
Satria nafàhana ny dimy tamin'ireo mpanoratra izay nampangaina tamin-javatra mitovy ihany, dia misy ny fanantenana hoe hanome izany ho an'ireo dimy sisa ambiny koa ny fitsarana Etiopiana. Tao anaty fanambaràna fohy, nilaza ireo mpanoratra nafahana fa mahavàka ny sain'izy ireo ny antony mbola maha-any am-ponja ireo namany, saingy be fanantenana kosa ry zareo fa tsy ho ela dia hanaraka ny dian'izy ireo ho ety anaty tontolo malalaka izy ireny.
Ary raha hita fa meloka ireo bilaogera?
Ho an'ny fanentanana ny olona hanao asa fampihorohoroana sy handika lalàna, ny sazy tsy maintsy zakaina ao Etiopia dia famonjàna valo taona raha kely indrindra. Kanefa, raha tsy misy ny porofo ho entina manohana izay rehetra fiahiahiana, antenaiko fa hitsara fotsiny ireo bilaogera amin'izay asany mifandray amin'ny hafanàm-pony miaro zon'olombelona ny fitsaràna, isan'izany ireo lahatsoratra nanakianan-dry zareo ny politikan'ny governemanta Etiopiana, ary dia hanafaka azy ireo.
Inona no ambaran'izany amintsika mikasika ny rafi-pitsaràna ao Etiopia?
Indrisy fa tsy zavatra hafahafa no ahitàna ny raharaha Zone9Bloggers ao anatin'ny rafi-pitsaràna faran'izay tsy manana elanelam-panahy ao Etiopia. Tendron'ny vongan-dranomandry io ao anatin'ny fivoaran'ny kolikoly ara-politika sy ny rafi-pitsaràna izay ny sangany sy ny vitsy an'isa manana fahefana no mifehy azy.
Endalk Chala dia mpikambana iray mpanorina ny fitorahana bilaogy iraisana “Zone9″ izay manomana diplaoma PhD ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Oregon any Etazonia.